Izitsha zesiJalimane ezijwayelekile | Izindaba Zokuhamba
Izitsha zesiJalimane ezijwayelekile
UMariela Carril | 23/12/2021 17:00 | Alemania, Gastronomy
IJalimane iyizwe elihlangene elinomlando wamakhulu eminyaka amaningi, ngakho ukudla kwalo kuveza lolu hambo lwamasiko. Ayidumile njengesiFulentshi, isiNtaliyane noma iSpanishi, kodwa iqiniso ukuthi inochungechunge lwezitsha okufanele uzizame uma uhamba ohambweni.
Khumbula ukuthi indawo lapho iJalimane itholakala khona inothe ngesiko futhi omakhelwane bayo banikele ngezinto ezithile ekwakhekeni kwe-gastronomy yesimanje yaseJalimane. Khona-ke namuhla, izitsha ezijwayelekile zesiJalimane.
1 Okuningi kunesoseji nobhiya
7 Amasoseji aseJalimane
Okuningi kunesoseji nobhiya
Into yokuqala efika engqondweni lapho sikhuluma nge-German cuisine yilezi zici ezimbili, kodwa ngokusobala i-gastronomy yaseJalimane ingaphezulu kakhulu. Eqinisweni, umlando omude wezwe wokupheka uhlobene nezimpande zawo kanye nendawo yawo. Ukudla kwaseJalimane sekuthuthukile emakhulwini eminyaka futhi kuhambisana nezinguquko zezenhlalo nezombusazwe, ngakho namuhla isifunda ngasinye sezwe sinesidlo saso esikhethekile kanye nokunambitheka kwaso okuhlukile.
Isibonelo, eningizimu yezwe yaziwa ngezitsha zayo zengulube, ngenkathi indawo ezungezile I-Hamburg idume kakhulu ngezinhlanzi. Iqiniso liwukuthi inyama ikhona ezitsheni zabo eziningi, emini nasekuseni ngisho nasekuseni.
Isidlo esijwayelekile sihlanganisa ingxenye yenyama, isoso enokhilimu, imifino ethile nobhiya, kodwa-ke ake sibone izitsha ezijwayelekile, lezo okungafanele ziphuthelwe.
Kuyinto a isitshulu senyama yenkomo esosiwe ngaphambili sasifakwe uviniga nezinongo ezihlukahlukene. Kuyisitshulu esiwugqinsi nesikhalori ngokwesiko wakhonza nge iklabishi elibomvu futhi eyodwa amadombolo wabiza izambane kartofflklöbe noma amazambane abilisiwe, alula kakhulu.
Inyama ingaba ihhashi noma inyamazane egayiwe ngoviniga omhlophe nezinongo izinsuku ezimbalwa. Imayelana esinye sezitsha zikazwelonke zaseJalimane futhi ihlezi ikumenyu yokudlela.
Ngabe amaqupha ezingulube futhi ngokuvamile zilingana nekhanda lomuntu. Ingabe a inyama eyosiwe, kuze kube yilapho isikhumba siphuma kalula ethanjeni futhi sithambile futhi sinamanzi futhi leso sikhumba sicwebile. Ipuleti ethandwa kakhulu eBavaria.
Lapha inyama iphinde ifakwe emanzini izinsuku ezimbalwa, ikakhulukazi uma ukusika kukhulu. Ibe yosiwe ezingeni lokushisa eliphansi amahora, phakathi kwamabili kuya kwamathathu kuye ngosayizi, futhi ngokuvamile ihanjiswa namazambane noma iklabishi. EMunich kunjalo el isidlo.
Lesi sidlo okujwayelekile esifundeni saseSaxony futhi ingumqulu wenyama enambitheka ehlukahlukene. Ingabe izingcezu ezincane kakhulu zenyama egoqwe nge-ham, u-anyanisi, ukhukhamba kanye nesinaphiabe eseyosiwa ngewayini elibomvu, elishiya ukunambitheka okumnandi ekupheleni kokupheka.
I-Rouladen ijwayele ukudliwa ngesidlo sakusihlwa namasemishi amazambane, amazambane agayiwe, noma iklabishi elibomvu. Njengesitsha esiseceleni, ungabona futhi imifino yonyaka, ubusika, ama-roasts. I-sauce esele iyingxenye ebalulekile yesitsha futhi ihlale ithululelwa phezu kwenyama.
Nakuba lesi sidlo singesi-Austrian, eJalimane sesidume kakhulu futhi. Ingabe a cutlet embozwe breadcrumbs noshizi kanye ham phakathiYeka isangweji, enikezwa amazambane kanye nesaladi eluhlaza.
Ucabangani ngaye isitshulu sikanogwaja? Uma uthanda isitshulu, i-Germany ingeyakho. Izitshulu zijwayeleke kakhulu emazweni lapho ubusika bubude futhi bunzima ngoba ziyizitsha ze-caloric kakhulu.
Kulokhu inyama kanogwaja isikwa ibe izingcezu ezilingana nokuluma kanye no-sfuthi bapheka no-anyanisi newayini amahora amaningana aze ajiye futhi enze isitshulu. I-marinade yenziwe ngewayini noviniga bese ijiya ngegazi likanogwaja.
Igama Hase ibhekisela eJalimane Umvundla, unogwaja kanye ne-pfeffer kungupelepele, nakuba ezinye izinongo nezinongo zivela ngale kukapelepele. EBavaria lesi sidlo sengeza i-paprika ebabayo noma emnandi,
Nakuba sithe ukudla kwaseJalimane akukwazi ukwehliswa kube amasoseji, ngeke siyeke ukuwaqamba. Kukhona isiko eside ekwenzeni amasoseji futhi kukhona abanye Izinhlobo eziyi-1.500 zamasoseji. Kuningi okukhethekile kwesifunda: isoseji elimhlophe laseMunich noma isoseji lengulube elineketchup elidumile eBerlin.
Amasoseji Zijwayele ukudliwa emgwaqeni, ziwukudla kwasemgwaqweni, kodwa kuyiqiniso ukuthi nazo zinikezwa epuletini ezindaweni eziningi zokudlela futhi azibizi kakhulu. Isoseji elijwayelekile, isibonelo, yi- I-Bratwurst noma i-sausage eyosiwe.
Iwukudla okuthandwa kakhulu emgwaqeni ezweni: ngokuvamile kwenziwa ngenyama yengulube nenyama yenkomo futhi kunongwe nge-ginger, i-nutmeg, i-coliander noma i-caraway, i-cumin. Iphakelwa yosiwe ngesikhumba esicwebezelayo futhi igezwe ngesinaphi ne-ketchup. Ngezinye izikhathi kungase ku-odwe nje ngesinkwa noma nge-sauerkraut. Ingabe a isidlo sasehlobo saseJalimane esijwayelekile.
Olunye uhlobo oludume kakhulu lwesoseji i-knockwurst noma isoso elibilisiwe. Yenziwe ngenyama yenkomo noma yengulube futhi ibukeka njengenkulu i-Hot dog. Kodwa kunomehluko ngoba inkulu kune-hot dog ejwayelekile futhi izithako zayo zingcono kakhulu. leli soseji linombala ophinki kanye no-a ukunambitheka kwentuthu okuncane ngoba ngemva kokubilisa iyabhema kancane. Wakhonza ngesinkwa kanye Dijon lwesinaphi.
Elinye isoseji ongalizama yi- weisswurst. Kuyisoseji yendabuko yaseBavaria eyenziwe ngenyama yenkomo egayiwe kanye ne-ham, enongwe nge-parsley, ilamula, u-anyanisi, i-ginger, i-cardamom.
Ngokuvamile, kunikezwa phakathi nokusa, njenge-snack, ngoba kuphekwe emanzini ashisayo, ngaphandle kokubilisa ukuze isikhumba singaphuli. Ngemva wakhonza nge-pretzel nesinaphi elimnandihey ubhiya omusha.
Siqhubeka namasoseji: I-Currywurst. lolu hlobo lwesoseji lwesiJalimane Yasungulwa eBerlin ngo-1949 futhi yenziwe ngengulube nesoso ye-ketchup kanye ne-curry powder. Kubonakala sengathi lezi zithako zanikezwa amasosha amaNgisi ayesedolobheni ngemva kokuphela kwempi.
Ziphakelwa zigosiwe futhi namuhla zithandwa kakhulu futhi kukhona ngisho nemnyuziyamu ngazo. Kokubili eBerlin naseHamburg baphakelwa amafrimu aseFrance bese befakwa esinkwa.
Njengoba ubonile amazambane akhona kakhulu ku-gastronomy yaseJalimaneku. Bangena ezweni ekupheleni kwekhulu le-XNUMX futhi ngekhulu le-XNUMX base bethandwa kakhulu. I-kartoffelpuffer yi-a i-pancake ethosiwe, amazambane ayagaywa ahlanganiswe neparsley, u-anyanisi namaqanda.
Iyisiyingi futhi ivamise ukuphakelwa ukudla kwasekuseni namaqanda, noma ngesoso yama-apula noma ukhilimu omuncu.
Bangamasemishi amazambane ajwayelekile kanye kunezindlela ezimbili zokulungiselela: kungaba ngokuxuba amazambane aluhlaza naphekiwe noma ngokuqondile namazambane aphekiwe acutshiwe kuze kube yilapho ehlanzekile, bese wenza amabhola amancane abilisiwe emanzini anosawoti.
Kuyisidlo sesibili esijwayelekile futhi ngezinye izikhathi inikezwa ngisho nemifino kuphela. Uma ihamba njenge-side dish, bangeza isoso. Kungukudla okulula okuthandwa kakhulu futhi ungafunda ngomlando wakho e-Thuringian Sandwich Museum, enye yamamnyuziyamu angcono kakhulu anikezelwe kwi-gastronomy.
Kulula nje iklabishi elibilile futhi igcwele izwe lonke. iklabishi lisikwa kahle kakhulu futhi livutshelwe isikhathi eside. Ihlala isikhathi eside futhi kukhona okumuncu, ngenxa yamagciwane abilisa ushukela eklabishi.
Iphinde isetshenziswe njengokuphelezela izitsha ezinenyama.
Kuyinto a isidlo semifino, ama-noodle amaqanda, futhi idume kakhulu hhayi eJalimane kuphela kodwa naseSwitzerland, e-Austria naseLiechtenstein. Zenziwa ngendlela yokuzenzela ngofulawa, ezintsha, usawoti kanye namanzi abandayo.
Khona-ke ama-noodle ayasikwa futhi aphekwe emanzini abilayo anosawoti kuze kube yilapho entanta. Aphakelwa kamuva noshizi omningi oncibilikisiwe futhi nakuba kungaba isidlo esikhulu ngokwako, ngokuvamile kunikezwa njengokuhambisana nenyama.
Lolu hlobo lukashizi luvela kakhulu emngceleni neSwitzerland futhi lune- ukuthungwa okukhilimu okumnandi kanye ne-flavour ethambile. Inamafutha ayingxenye, ibhotela elimsulwa, futhi ine-a iphunga elinamandla.
Kuyinto inguqulo yesiJalimane ye-pretzel futhi uzokubona lokho zithengiswa kakhulu emigwaqweni, ezindlini zokugcina izimpahla nasezitolo ezinkulu. Aminyene, anosawoti omningi futhi anembewu yesesame phezulu. Zingadliwa zodwa noma ngesinaphi.
Ekugcineni, akekho ongadla eJalimane ngaphandle kokuphuza ubhiya. IJalimane inesiko elikhulu lokuphuza utshwala, emakhulwini eminyaka. Izinhlobonhlobo ze-Pilsner zithandwa kakhulu kuzo zonke, kodwa isifunda ngasinye noma idolobha noma idolobha linenguqulo yalo.
I-Bavaria iyindawo yobhiya eyaziwa kakhulu futhi lapha ungakwazi ukunambitha ubhiya omuhle kakolweni. Ingabe akhona ama-dessert aseJalimane ajwayelekile? Yebo, i amakhukhi e-gingerbread noma i-lebkuchen, lo i-apfelkuchen noma i-apula pie, i-strudel enembewu ye-poppy, ama-pancake noma i-kaiserschmarrn, ikhekhe Lehlathi Elimnyama, uKhisimusi ojwayelekile ontshontshiwe ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Alemania » Izitsha zesiJalimane ezijwayelekile
Yini ongayibona e-Andorra ezinsukwini ezi-2 noma ezi-3